Momba anay - Weifang Zhicheng Machinery Co., Ltd.
Masinina Co., Ltd.
Weifang Zhicheng Machinery Co., Ltd. Any amin'ny renivohitry ny kite tsara tarehy eran'izao tontolo izao- Tanànan'i Weifang, faritanin'i Shandong. Ao amin'ny Junbukou Industrial Park no misy azy ary tena mety ny fitaterana.
Niorina tamin'ny taona 2009. ny orinasa dia manana tanjaka ara-teknika matanjaka sy ny haitao mandroso, ny ankamaroany dia mamokatra traktera minier, tracteur mandeha, mpamboly rotary, masinina mandavaka, milina miasa tany lalina, masinina miverina amin'ny lozam-pifamoivoizana, vokatra fambolena hafa.
Ny orinasa dia nandalo ny fitantanana rafitra fitantanana kalitao 1SO sy ny fanamarinana CE.
Manaraka hatrany ny fitsipiky ny "kalitao aloha, mpanjifa aloha", miaraka amin'ny toe-tsaina siantifika sy henjana, mpisava lalana ary manavao, ary mandroso hatrany. Hatsarao ny serivisy aorian'ny varotra ary hamafiso ny ekipan'ny serivisy, mba hahafahanay mpanjifa vaovao sy antitra manome vokatra tsara sy serivisy tsara kokoa.
Fiaraha-miasa amin-kitsimpo amin'ireo mpandraharaha eto an-toerana sy avy any ivelany, mandroso an-tanana, mamorona mamiratra.
Mpanamboatra matihanina ary mpitarika ny milina fambolena
Misy mihoatra ny 10 andiam-pamokarana mandroso sy fitaovana fanandramana miantoka ny kalitaon'ny vokatra, manana ekipa teknika matihanina koa izahay amin'ny famolavolana sy famokarana izay afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa, izany no antony ahafahanay manohana ny tsipika famokarana OEM. Manolotra 24 ora mialoha- varotra sy aorinan'ny varotra aorinan'ny varotra, hahazoana antoka ny fifandraisana ara-potoana eo amin'ny mpanjifa sy anay ankoatr'izay., ireo rehetra ireo dia miantoka ny vokatra hainay. Ary nametraka fifandraisana tena tsara amin'ny firenena amerikana atsimo, eropeana, aziatika ary afrikana izahay .Mivelatra karazana vokatra vaovao farafahakeliny 2 isan-taona hihaona amin'ny tsena eran'izao tontolo izao. Ny ekipanay dia manana traikefa manankarena sy matihanina amin'ny fifampiraharahana amin'ny orinasa iraisam-pirenena. Ny orinasanay dia miorina ao amin'ny tanànan'i Weifang, faritany shandong, 180km miala ny seranan'i Qingdao, miaraka amina seranam-piara-manidina Weifang akaikin'ny orinasa misy anay, noho izany, tena mahasoa ny mpanjifa ny mitsidika, manantena fiaraha-miasa aminao!